Dhalada Biyaha Silica Leh
Dhalada Biyaha Silica Leh Aquarius Happy waa dhalo biyo ammaan ah oo wanaagsan oo wanaagsan oo da 'kasta leh. Waxay leedahay qaab wareeg ah oo jilicsan oo qaabeysan oo qaabeysan iyo indho qabasho leh labajibbaaran midabyo muuqaal ah, oo soo bandhigaya dareen dhalinyaro ah, firfircoon iyo moodada. Lagu sameeyay 100% heerka silicone-ka dib loo cusbooneysiin karo, sii wadida heerkulka cabirka 220 deg. C to -40 deg. C, malaar caag ah oo la soo saaray oo bilaash ah BPA. Dareenka dusha jilicsan ee dusha sare ah ayaa siiya dareen xariif ah, quruxsan oo xajin iyo qabasho leh. Guga-barafnimada, dabacsanaanta iyo muuqaalka qaab dhismeedka bannaanka ayaa u oggolaanaya dhalada inay ku shaqeyso sidii gacan-qabashada gacanta iyo sidoo kale gulukoos culeyskiisu culus yahay.
Adeegyada Hudheellada Iyada oo laga helay dhiirrigelin ka timid cunnooyinka fudud ee dhaqanka Tainan ee dhaqanka (magaalo duug ah oo ku taal Taiwan oo ay ka buuxaan hiddaha hiddaha), adoo u beddelaya qaybo hudheello ah, taxanahan noocyada cuntooyinka ah ee had iyo jeer lagu yaqaanno deegaanka sida & quot; Marn & quot ;, waxay ka dhigan tahay dhammaystirka dhaqanka Shiinaha; rootiga bariiska qoorta-jilicsan sida saabuun gacanta iyo saabuun saabuun, keega bean bean sida musqulaha, tang yuan macaan qumbaha sida kareemka gacanta iyo hilib la kariyey & amp; Tainan bunni sonkorta bunkeed sida shaaha loo dhigay. Hiddaha dhaqanka Tainan wuxuu ku fidaa adduunka oo dhan maadaama hoteelku yahay meel wanaagsan oo lagu dhiirrigeliyo dhaqanka maxalliga ah.
Sabti 21 Bisha Sideedaad 2021
Saxarada Kala, saxaradii lagu sameeyay bamboo la jaray oo leh aalad dib loo celin karo oo ka dhex jirta bartamaha. Qaadashada qaab dhismeedka dalladda-waraaqda saliid ahaan, dhiirrigelinta tuubbooyinka loo yaqaan 'bamboo strip' ayaa ah kuleyl la dubay oo isku dhejiyay caaryada alwaaxa u beddelay qaab ahaan, taasoo muujineysa fudeydkeeda iyo soo jiidashada qurxinta. Waxa xiisaha lihi la egyahay nuglaanshaha qaab dhismeedka dhir dillaacay oo loo qaabeeyey iyo habka dib loo eegi karo ee xariiqda dhexe, qofku wuxuu heli doonaa is dhexgalka markuu ku fadhiyo Kala saxarada, wuxuu u soo degi doonaa si sahlan oo qumman, marka qof ka kaco saxarada Kala, wuxuu dib ugu laaban doonaa meeshiisii. .
Ciyaarta Tababarka Neefsashada
Jimco 20 Bisha Sideedaad 2021
Ciyaarta Tababarka Neefsashada Waa aalad u eg shey u eg oo loogu talagalay da 'kasta si qof walbaa uu uga faa iideysto tababarka neefsashada ee joogtada ah si kor loogu qaado awooda sambabka isaga oo ku dhawaaqayo kubada si uu uga gudbo wadooyinka isbaarooyinka kaladuwan ee xakameeya neefsashada iyo qulqulka hawada. Wadooyinku waxay ku yimaadaan qaybo kala duwan, kuwo is beddeli kara oo isweydaarsan kara. Qaab dhismeedka magnetic-ka ee loogu talagalay dhisaha neefsashada kaasoo bixiya hagaajin ku habboon qofka xaaladdiisa neefsashada.
Set Alaabta Guriga
Khamiis 19 Bisha Sideedaad 2021
Set Alaabta Guriga ChuangHua Tracery waxay ku habboontahay guriga qurxinta, goob ganacsi, hudheel ama istuudiyaha kaas oo nuxurkiisu uu dhiirrigeliyay ChuangHua, oo ah shaashadda Shiinaha ee shaashadda. Adeegsiga tikniyoolajiyadda biraha bir-xajiska ah iyo daaha rinjiga budada ah ee midabbada guduudan oo midab leh oo casaan leh oo cadcad u iftiiminaya muuqaalkeeda, taasoo ka dhigaysa mid ka xor ah muuqaalka macdan ee adag, qabow iyo culus. Nadiif ahaan fudud oo nadiif ah qaabkiisa qaab dhismeedka loogu talagalay, markii nalka ka gudbo habka goynta leysarka, hooska ayaa la saadaalinayaa derbiga iyo dabaqa hareeraha ee muujinaya muuqaal quruxsan.
Poise Laambad Miiska La Hagaajin Karo Sabti 23 Bisha Tobnaad
Memento Furitaanka Warqaddu Jimco 22 Bisha Tobnaad
Exxeo Digaag Isku Dheelitiran Khamiis 21 Bisha Tobnaad
Barnaamijyada Mobilada Dhalada Biyaha Silica Leh Adeegyada Hudheellada Saxarada Ciyaarta Tababarka Neefsashada Set Alaabta Guriga